एक्कासी के भयो रेशम चौधरीलाई ?::News from Nepal
राजपा बाट प्रतिनिधी सभा निर्वाचन जितेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी वीर अस्पताल भर्ना भएका छन् । फोक्सो र ढाँडमा समस्या देखिएपछि चौधरीलाई बिहीबारदेखि वीर अस्पतालमा कडा सुरक्षा घेराबीच भर्ना गरिएको छ । अस्पतालमा उपचारत रहँदा पनि चौधरीको खुट्टामा प्रहरीले नेल लगाइनै रहेको छ ।
लामो समय देखि जेल जीवनमा रहेका चौधरी १५ दिन अगाडि देखिनै विरामी परेको र उनलाई जेल प्रशासन र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अस्पताल भर्ना गरिएको चौधरीको पारिवारीक स्रोतले जानकारी दिएको छ । हो । चौधरीको फोक्सो भएको समस्याका कारण स्वास फेर्न समस्या भएको छ ढाँडको बोनम्यारोमा भएको समस्याका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भएका छन् ।
रेशमलाई कम्तिमा डेढ हप्ता अस्पतालमै बस्न डाक्टरहरुले सुझाव दिएका छन् । दैनिक थेरापी गर्न र बेड रेष्ट गर्न पनि उनलाई सुझाव दिइएको छ ।
अस्पतालमा भर्ना गरिए पनि उनको खुट्टामा मोटो नेल लगाइएको छ ।
कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका चौधरीलाई संविधान जारी गर्ने क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा एसएसपी र नाबालकसहित नौ जनाको हत्यामा संलग्नता रहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले गएको माघ २२ गते उनीसहित अरु ११ जनालाई जेल सजाय सुनाएको थियो ।
घटनापछि भारतमा लुक्दै आएका चौधरी २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा ३४ हजार तीन सय ४१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
अदालतको फैसलापछि चौधरी शिथिल बनेका थिए ।
गएको पुस ११ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई सांसद पदको पशथ गराए पनि अदालतको आदेशका कारण जेल जीवन बिताइ रहेका छन् ।
छुट्यो की ?
सदनमै गच्छादरले रिस फेरे उपेन्द्र सँग
कुनै बेला एउटै पार्टीको रथ हाँकीरहेका उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छादर अहिले राजनितिक रुपमा करिब २ किनार जस्तै भएका छन् । सत्ताराजनितिकै कारण चोइटिएका उनिहरु विच सम्बन्धमा पनि लामै समय देखि चिसोपना रहेको कुरा ओपन सेक्रेट नै छ । उपेन्द्र सँग डिभोर्स गरेर पटक पटक सत्ता राजनितीको सयल गरेका गच्छादारको दिन फेरिएको छ । अहिले उनी प्रतिपक्षी बेन्चमा छन् भने उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाइरहेका छन् ।
यस विच गच्छादरले आज उपेन्द्र माथी सटाएर हानेको छन् ।नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले धेरैपछि समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि टिप्पणी गरेका छन् । हतपत कुनै नेतामाथि टिप्पणी गर्न नरुचाउने गच्छदारले आज संसदमा बोल्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवमाथि टिप्पणी गरे । उनले देशमा जारी भएको संविधानले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताए ।
उनले भने, ‘मधेशी समुदायलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । मधेशी दललाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । धेरै चर्को अवाज उठाउने मधेशी नेताहरु पनि यसै सदनमा छन् । कोई कोइ त सरकारमा पनि हुनुहुन्छ । सरकारको उच्चतम पदमै हुनुहुन्छ । उहाँलाई मेरो कुरा नमिठो लाग्न सक्छ । त्यसैले मेरो कुरातिर ध्यान छैन । तर सदनको ध्यान अवश्य भइरहेको छ ।’
यो कुरा भनिरहँदा उपप्रधानमन्त्री यादव रक्षा मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलसँग कानेखुशी गरिरहेका थिए । त्यही भएर नेता गच्छदारले उहाँलाई मेरो कुरा नमिठो लाग्नसक्छ, त्यसैले मेरो कुरातिर ध्यान छैन भनेका थिए ।’
नेपाली काँग्रेस त्योगेर २०६५ सालमा गच्छदार उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेर फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । तर उनी त्यहाँ धेरै दिनसम्म टिक्न सकेनन् । कट्वाल काण्डपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा उनले फोरम नेपाल विभाजन गरेर फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए ।
फोरम लोकतान्त्रिकबाट उनी पटक–पटक सरकारमा गएका थिए । तर उनले त्यो पार्टी चलाउन सकेनन् र काँग्रेससँग एकीकरण गरे । उनले सदनमा भने, ‘संविधान साझा दस्तावेज हो । कुनै दल विशेषले ल्याएको संविधान होइन । घोर असहमतिको बाबजुद पनि संविधान जारी गर्यो । त्यो सविधानले धर्म निरपेक्ष, धार्मिक स्वतन्त्रता, संघीयता समानुपातिक सिद्धान्तलाई पनि स्थापित गरेको छ । अहिलेको सविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि स्थापित गरेको छ ।’